Ukutshabalaliswa kweYerusalem eqikelelwe ukuwa kweAshkelon
Ukunqotshwa kukaNebhukadenetsare kwakubonakalisa ukrakra, iMfazwe yaseBrutal
Ukutshatyalaliswa kweYerusalem ngo-586 BC kwadala ixesha elikwimbali yamaYuda elaziwa ngokuba yiBhabhiloni . Okumangalisayo kukuba, njengesixwayiso somprofeti encwadini kaJeremiya kwiBhayibhile yesiHebhere, ukumkani waseBhabhiloni uNebhudenetsare wanika amaYuda isilumkiso esilungileyo malunga nokuba kwenzekani, ukuba bawela, ngendlela awachitha ngayo iAshkelon , inkulu yeentshaba zabo, Ma Filisti .
Ukufunyanwa kwezinto zakudala ezisekuhlaleni kweAshkelon, i-Philistia eyinqaba enkulu, unikezela ubungqina bokuthi ukunqoba kukaNebhukadenetsare neentshaba zakhe kwakungekho bubele.
Ukuba ookumkani bakwaYuda babephulaphule isilumkiso sikaYeremiya umprofeti malunga nokulinganisa iAshkelon kunye nokwamkela iYiputa, ukutshabalaliswa kweYerusalem kwakuye kwaphetshwa. Endaweni yoko, amaJuda ayengayithobeli inkolelo yenkolo kaYeremiya kunye nokunyaniseka kwehlabathi le-Ashkelon.
Ngasekupheleni kwekhulu le-7 le-BC, iFilipi kunye noYuda babeyiindawo zokulwa emzabalazweni phakathi kweYiputa kunye ne- neo-eBhabhiloni ephindaphindiweyo ukuba ithathe iindawo zokuhlala ezikummandla wase- Asiriya . Ephakathi kwe-7 leminyaka BC, iYiputa yenza inxulumaniso yeFilipi kunye noYuda. Ngo-605 BC, uNebhudenetsare wahola umkhosi waseBhabheli ukuya ekunqobeni kweMikhosi yaseYakram eYordan eMfuleni wase-Ewufrathe kwindawo ekhoyo kwintshona yeSiriya . Ukunqoba kwakhe kubonakala kuYeremiya 46: 2-6.
UNebhukadenetsare Wavutha Ngobusika
Emva kweKarkemishe, uNebukhadinezari walandela icebo elingavamile lokulwa: waqhubeka elwa imfazwe ngo-604 BC, eyona imvula eMpumalanga Ephantse.
Ngokulwela ngamanye amaxesha iimvula ezinqabileyo naphezu kweengozi ezibangelwa amahashe kunye neenqwelo zokulwa, uNebhukadenetsare waba ngumntu ongenamdla, ongapheliyo onokukwazi ukuphazamisa ukutshabalalisa.
Kwinqaku elingu-2009 elibizwa ngokuthi "Intukuthelo eBhabhiloni" kwi-e-book ye-Biblical Archeology Society, i- Israel: Uhambo lwe-Archaeological , u-Lawrence E.
Stager ucacisa i-cuneiform record ebizwa ngokuba yiBhabhiloni Chronicle :
" [UNebukhadinezari] waya e-Ashkelon, wayibamba enyangeni yeKiselu [ngoNovemba / Disemba]. Wathabatha ukumkani wayo, wayiphanga, wayithatha ixhoba layo. (Akkadian ana tiri, ngokoqobo ukutshilo) kunye neenqwaba zamatongo ...; "
Ubungqina Bokukhanya Ukukhanya KwiNkolo noQoqosho
UDkt. Stager ubhala ukuba i-Levy Expedition yafumanisa amakhulu eempahla ze-Ashkelon ezikhanyisa uluntu lwamaFilisti. Phakathi kwezinto ezifunyenwe kwakukho imithi emikhulu, emininzi emininzi eyayingabamba iwayini okanye ioli yeoli. Imozulu yeFilipi kwi-7 leminyaka BC yenza kube lula ukukhula kwamagilebhisi kwiwayini kunye nemifuno yeoli. Ngaloo ndlela abadala be-archaeologists ngoku bacinga ukuba kunengqiqo ukucetyisa ukuba le mveliso emibini yayiyiinkampani eziyinhloko zamaFilisti.
Iwayini kunye namafutha omnquma bezinto ezingenakusiza ekupheleni kwekhulu le-7 kuba babeyisiseko sokutya, amayeza, izimonyo kunye nezinye izilungiselelo. Isivumelwano somrhwebo kunye neYiputa ngenxa yale mveliso yayiya kuba luncedo kwizezimali kwiFilipi nakwaYuda. Iimbambano ezinjalo nazo ziya kubangela ingozi eBhabhiloni, kuba abo abanobutyebi bazingcungca ngakumbi uNebhukadenetsare.
Ukongeza, abaphandi baLevy bafumene iimpawu ukuba inkolo kunye neentengiso zazisondelelene kakhulu eAshkelon. Phezulu kwinqaba ye-rubble kwi-bazaar eyona mkhulu bafumana isibingelelo sephahla apho bekutshiswa khona isiqhumiso, ngokuqhelekileyo sibonakaliso sokufuna unqulo lukaThixo ngomntu othile. Umprofeti uYeremiya wavakalisa ngokuchasene nalo mkhuba (uYeremiya 32:39), ekuthiwa yenye yeempawu eziqinisekileyo zokutshatyalaliswa kweYerusalem. Ukufumana kunye nokuthandana kwe-altare lase-Ashkelon bekuyixesha lokuqala i-artifact iqinisekisa ukuba kukho izibingelelo ezikhankanywe eBhayibhileni.
Iimpawu ezibangela ukutshabalalisa
Abavubukuli bafumene ubungqina obuninzi bokuthi uNebhukadenetsare wayenentloni ekunqobeni iintshaba zakhe njengoko wayekutshatyalaliswa kweYerusalem. Ngokomlando xa isixeko sasijikelezwe, umonakalo omkhulu unokufumaneka kwiindonga zayo kunye namasango aqinekileyo.
Noko ke, e-Ashkelon, amatshabalalo angowona uphawulo lwangaphakathi kweso sixeko, esasazeka ngaphandle kwiindawo zorhwebo, urhulumente kunye nenkolo. UGqirha Stager uthi oku kubonisa ukuba isicwangciso sabahlaseli kwakukukunqumla amaziko emandla aze aphangwe kwaye asitshabalalise isixeko. Le ndlela yayiyeyona ndlela yokutshatyalaliswa kweYerusalem, kubonakaliswe ukubhujiswa kweNdlu yokuqala.
UDkt. Stager uyavuma ukuba i-archeology ayinakuqinisekisa ngokunyanisekileyo ukuba uNebhukadenetsare wanqoba i-Ashikeloni ngo-604 BC Nangona kunjalo, uye wabonisa ngokucacileyo ukuba ummandla waseFilati unxweme washabalaliswa ngokukhawuleza ngelo xesha, kunye nezinye iimithombo ziqinisekisa i-campaign yaseBabiloni ngexesha elifanayo.
Izilumkiso ezingabanjwanga kwiYuda
Abemi bakwaYuda basenokuvuyela ukufunda ngoNebhukadenetsare wanqoba iAshkelon ekubeni amaFilisti ayekade etshaba amaYuda. Amakhulu eminyaka ngaphambili, uDavide wayelilele ukufa komhlobo wakhe uYonatan noKumkani uSawule kwi-2 Samuweli 1:20, "Musa ukuthetha eGati, ungayifaki kwizitrato zaseAshkelon, hleze iintombi zamaFilisti zijabule ...."
Ukuvuya kwamaYuda ngamava kaFilistiya kwakuza kudala. UNebhukadenetsare wazingqinga iYerusalem ngo-599 BC, eyinqoba kwisixeko emva kweminyaka emibini. UNebhukadenetsare wamthabatha uYekoniya kunye namanye amaYuda, waza wazikhethela, uZedekiya, njengenkosi. Xa uZedekiya evukela iminyaka engama-11 kamva ngo-586 BC, ukubhujiswa kweNebhukadenetsare yeYerusalem kwakungekho bubele xa umkhankaso wakhe wamaFilisti.
"Ukuthunjwa kwamaYuda - iBabiloni Captvity," http://ancienthistory.about.com/od/israeljudaea/a/BabylonianExile_2.htm
"Intukuthelo yeBhabheli" nguLawrence E. Stager, u- Israel: Uhambo lwe- Archaeological Society (i-Biblical Archeology Society, 2009).
I-Oxford Study Bible kunye ne-Apocrypha , iNew Revised Standard Version (1994 i-Oxford University Press).
Amazwana? Nceda uthumele kwi-forum yentambo.
Iimpahla ezizimeleyo, iiMpahla zikaRhulumente, iiMpahla eziKhuphekayo, kunye neeClubs Goods
Hamba ukunyuka kwi-Garden of Gods
Iimviwo zee-Cenozoic Era
Iintlanganiso eziPhambili zeeNtsapho zamaKristu
Isihlandlo seMfazwe yaseKorea
Imfazwe YaseMelika: U-Brigadier General Nathaniel Lyon
UkuQondwa kweBakala lesiBili ukuHlola iincwadi
Amanqaku e-11 yeBakala Chemistry kunye nokuHlola
Uluhlu lweZibonelelo zabaFundi abaDala abaneSifundo seNdlela yokuFunda
KwiSyunivesithi yaseStony Brook
Umzekelo weZitheno Zithengi